I-China i-12-16 yeminyaka emide yemikhono emide ye-Boy T-Shirt PY-TC003 yokwenziwa kunye nefektri | IPinyang
I-T-shirt yomfana enemikhono emide eneminyaka eli-12-16 ubudala
1. Loluphi uhlobo lweT-shirt olulungele amakhwenkwe amancinci?
Kubantwana, iimpahla zemibala eyahlukeneyo zilunge kakhulu kubo - ukukhanya kwelanga kunye nobuhle zizinto eziqhelekileyo zabantwana. Sonke siyayithanda imeko engenacala neyothando yabantwana, ke abantwana abawukhethi umbala wempahla. Ukuba "bahlala" kumbala omnye xa besebancinci, baya kuphulukana nephupha labo elinemibala. Bafuna isikipa esinobuhlobo nesinemfashini, olu lwakhiwo lwelaphu elimsulwa lomqhaphu, abantwana bahlala bebila xa bedlala, emva koko umqhaphu ococekileyo lelona laphu libalaseleyo lokufunxa, abantwana banxiba bekhululekile kwaye bengathinteleki.
2, Zithini iinzuzo zeT-shirt ezinemigca?
I-T-shirt emhlophe ilula kwaye iyaguquguquka, kulula ukuyidibanisa nemibala eyahlukeneyo yempahla, kulula kakhulu ukuyikhanyisa, ke ehlotyeni ithandwa kakhulu ngabafana abancinci kunye noomama. Umzekelo, le T-shirt imhlophe ilula kwaye ayiqhelekanga, enomdla yoyilo lweepateni ecaleni, eyenza i-T-shirt iphela ibe bhetyebhetye, ilula kwaye inemfashini.
Isikipa esimhlophe sinoyilo olungaqhelekanga ecaleni. Uyilo lokusika lwe-trapezoidal lwenza i-T-shirt iphelele ibonakale yahlukile kwaye inomdla. Esi sikipa silula kunye nesahlukileyo sinokubonisa ngokulula ubuntu befashoni yabantwana ehlotyeni.
Isikipa esimhlophe esinemigca emhlophe, isikipa esimhlophe esinemigca eyipateni yoyilo, emva koko uyilo olunomdla, isikipa esinje kunesikipa esimhlophe esilula siyathandeka ngakumbi kubugcisa, imfashini kwaye intle.
Ukusetyenziswa kwemveliso: yengubo yeqela, ulwenziwo lomntu, njl., Unokwenza umbala, iphethini, ilogo.
A: Singumvelisi wokuqala kwaye sithengisa ngokuthe ngqo ngamava emi-5.
Q: Zeziphi iimveliso zakho eziphambili?
A: Singumvelisi oqeqeshiweyo wempahla yokunxiba yabantwana, ezona mveliso zethu ziphambili zii-T-shirts, iibhulukhwe, iibhulukhwe ezimfutshane, ijezi, ubuze, iibhatyi, kunye neesuti zomntwana ezineminyaka eyi-0 ~ 10.
Q: Uthini umgangatho weemveliso zakho?
A: Samkele umgangatho olungileyo kunye ne-Eco-friendly amalaphu, ephefumlayo kwaye kamnandi, ilungile kulusu lwabantwana .Imveliso zethu zilupasile uvavanyo lwempahla lweSGS.
Q: Kutheni amaxabiso akho esezantsi kunabanye ababoneleli?
A: Nceda uqaphele ukuba singumvelisi wokuqala kunye nomthengisi othe ngqo, ke amaxabiso ethu asezantsi.
Iimveliso zethu zikumgangatho ofanayo ngexabiso eliphantsi, ixabiso elifanayo elinomgangatho ongcono.
Q: Ndingaba nelogo yam kwiimveliso?
A: Ewe, unokuba nelogo kwiimveliso. I-MOQ yi-50pcs / uyilo. nceda unxibelelane nathi ukuba ii-odolo zesiko.
A: Ukuba iodolo yoyilo lwangoku, zikulungele ukuthunyelwa .iipaseli ziya kuthunyelwa zingaphelanga iintsuku ezisi-7 emva kokufunyanwa kwentlawulo .Ixesha lokuthumela lixhomekeke kweliphi ilizwe
Ukuba inkonzo yesiko, ixesha lokuhambisa elithile lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo yakho.
Q: Ungayisombulula njani ingxaki esemgangathweni emva kokuthengisa?
A: Thatha iifoto zeengxaki uze uthumele kuthi. Siza kwenza isisombululo esonelisekileyo kuwe kwiiyure ezingama-24 emva kokuba siqinisekisile iingxaki.
Egqithileyo Iintsana eziMhlophe eziLandelela iiSuti PY-YR002
Okulandelayo: Iipateni ezinokwenziwa ngokwezifiso ihempe eziMfutshane eziMide zeNkwenkwe iPY-TC001
I-100% yoMqhaphu omncinci weSikhono seNkwenkwe i-T-Shirt PY-TD002